२२ बर्षीया रेबेका गिबोन्स क्यानेडियन नागरिक हुन् । नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्र इलाममा ८ महिनाअघि भोलेन्टियरको रुपमा स्वास्थ्यसम्बन्धी एक परियोजना लिएर आएकी रेबेकाको इलाम बसाइ केहि साता मात्र बाँकी छ । इलाम बसाइको दौरानमा रेबेकाले इलाममा रहेका बीस निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिन् भने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय इलामका महिला स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हात धुने चरणहरुको विषयमा सेवाग्राहीहरुलाई सिकाउन प्रोत्साहित समेत गरिन् । गत बर्ष क्विन्स युनिभर्सिटीबाट स्वास्थ्य शिक्षामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी इलाम आएकी रेबेका इलाम बसाइको क्रममा यहाँको संस्कृतिसँग नजिकिने मौका पाइन् । उनै रेबेकासँग सन्दकपुर दैनिकले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
प्रश्नः इलाममा सञ्चालन गर्नुभएको परियोजनाको नाम के हो ?
उत्तरः नामसालिङ सामुदायिक विकास केन्द्रमा रहेर ‘स्वास्थ्यको लागि पहल’ भन्ने परियोजना आठ महिनासम्म इलाममा सञ्चालन गरियो ।
प्रश्नः परियोजना कसरी सञ्चालन गर्नुभयो ?
उत्तरः हामीले इलाममा छनौटमा परेका सात तथा अन्य गरी बीसवटा निजी तथा सामुदायिक विद्यालयमा हातधुने चरणहरुको विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन ग¥याँै । विशेष गरी स्वास्थ्यमा नकरात्मकरुपमा पर्ने प्रभाव नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन ग¥याँै । मलाई लाग्यो, हामीले प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन ग¥याँै । मुल्याङ्कन गर्ने जिम्मा भने तपाइँहरुको ।
प्रश्नः यस्तो साना परियोजनाहरु कसरी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ?
उत्तरः विद्यार्थीहरुलाई किताब पढाएर मात्र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गर्न सकिँदैन । किताबमै भएका विषयहरुलाई व्यावहारिकरुपमा प्रस्तुति गरेर विद्यार्थीहरुलाई बुझाउने शैली उत्कृष्ट हुन्छ । हामीले हात धुने चरणहरु सिकाउँदा बास्केट, साबुन, टेवल नै ल्याएर व्यावहारिकरुपमा सिकाउथ्याँै । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुले सहजै बुझ्न सक्छन् । अझ सिकाउने शैली फरक भए र शैलीमा नयाँपन ल्याउन सके त अझ प्रभावकारी हुन्छ ।
प्रश्नः कुन उमेर समुहका विद्यार्थीहरुलाई कार्यक्रम लक्षित गर्नुभएको थियो ?
उत्तरः १२ देखि १४ बर्ष उमेर समुहका विद्यार्थीहरुलाई कार्यक्रम लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
प्रश्नः जिल्लाको कतिवटा गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो ?
उत्तरः इलामको माबु, माइमmभुवा, पञ्चकञ्या र गोदक गाविसमा रहेर महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुसँग काम गरियो । त्यसैगरी नामसालिङमा विषेश गरी विद्यालयमा तथा समुदायमा कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।
प्रश्नः परियोजना सञ्चालनपछि कस्तो प्रभाव भएको पाउनुभयो ?
उत्तरः हामीले परियोजना सञ्चालन भएको स्थानमा हातधुने बानीको विकास भएको पाइयो । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुले आफ्ना सेवाग्राहीहरुलाई पनि हातधुने बानी सिकाएको पाइयो । अझ महत्वपूर्ण कुरा त के छ भने सबैले हातधुन साबुनको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
प्रश्नः तपाइँ गोरो छाला भएको मान्छे । स्थानीयले कुनै विषयमा गएर सहजीकरण गरेको तथा तपाइँले गएर गरेको सहजीकरणमा के फरक हुँदो रहेछ ?
उत्तरः (हाँस्दै) केही त फरक हुँदोरहेछ । नयाँ मानिसको महत्व नै फरक जहीँ पनि हुन्छ । म गोरो भएकोले मानिसहरुले मैले के बोल्छन् भनेर सुन्न चाहँदारहेछन् । फेरि मैले हसाउने शैलीले कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छु । त्यही भएर पनि उनीहरुले मलाई ध्यान दिएर सुन्दारहेछन् ।
प्रश्नः यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यको विषयमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, कस्तो रह्यो कार्यक्रम ?
उत्तरः त्यो मेरो आफ्नो परियोजना बाहिरको कार्यक्रम हो । वाईपियरको कार्यक्रमलाई मैले सपोर्ट गरेको हुँ । वाईपियरको टेन डेज अफ एक्टिभिजम कार्यक्रम एकदमै प्रभावकारी कार्यक्रम थियो । एकदमै इन्नोभेटीभ आइडियाका साय इलामका युवाहरुले कार्यक्रम सम्पन्न गरे ।
प्रश्नः तालिमलाई प्रभावकारी बनाउन कुन कुन टुल्सको प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
उत्तरः योजना बनाउनको लागि समय खर्च गर्नुपर्छ । आफ्नो लक्षित समुहको सही पहिचान गर्नुपर्छ । अनि तालिममा कन्टेन्ट र फनलाई ब्यालेन्स गर्ने विषयलाई ध्यानमा राख्ने हो भने तालिम उत्कृष्ट हुनसक्छ ।
प्रश्नः अभिभावकहरुलाई स्वास्थ्यको विषयमा सचेत गराउन के गर्नुपर्ला ?
उत्तरः हामीले नेपालवाणी एफएममा स्वास्थ्यको विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यौँ । यो एउटा महत्वपूर्ण टुल्स हुन सक्छ । अन्य पनि तरिकाहरु हुन सक्छन् । अभिभावकहरुलाई तत्कालै परिवर्तन गर्न सकिदैन, बिस्तारै बानी पार्दै लान सक्ने प्रकारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
प्रश्नः अन्त्यमा ?
उत्तरः पहिलो त परियोजना सफल पार्न सहयोग गर्ने मेरो टिम र एनसीडीसीलाई धन्यवाद । इलामेहरुले एकदमै माया गर्नुभयो । वहाँहरुको स्नेह मैले कहिल्यै भुल्न सक्दिन । मलाई बहिनी, छोरी, दिदीको रुपमा माया दिने सबै इलामेहरु मेरो चीरस्मृतिमा रहनुहुनेछ । अर्को कुरा परियोजना एकबर्ष पुन थप भएको छ । सायद म इलाममा नरहेर पनि परियोजनामार्फत म इलाममै रहेको महसुस गर्नेछु ।